Ny ROM OS Lineage tsy ofisialy voalohany misy | Vaovao momba ny gadget
Ny ROM OS Lineage tsy ofisialy voalohany dia efa misy
La Ny sakafo hariva noely dia nohanin'ny vaovao marikivy izay nanananay tamin'ny maraina ary midika izany fa hamarana ny androny i Cyanogenmod ny fanapahan-kevitra noraisin'i Cyanogen handamina indray ny ao anatiny. Cyanogenmod izay iray amin'ireo fiarovana mafy ho an'ny Android nandritra ny taona maro raha narary saika narary ny sosona fanaon'ny ankamaroan'ny mpanamboatra na adinon'izy ireo ny manavao ireo terminal.
Saingy mbola tsy vita ho an'ny ekipa ao ambadiky ny CyanogendMod izay rehetra te-hifandray amin'ny fiarahamonina indray Android amin'ny alàlan'ny Lineage OS, filohan'i Kondik hamerina ny fanahin'ny CM. Nandray an-tanana ny OS Lineage ary velona avy any GitHub izao ilay tetikasa. Ny tsara indrindra dia efa manana ROMs Lineage OS tsy ofisialy azonao alaina amin'ny terminal ianao.
Lineage OS no tena izy ny firmware farany mafy orina CyanogenMod, noho izany dia tsy tokony hanome olana an'ireo mpampiasa manana ireto manaraka ireto:
LG G20 avy amin'i T-Mobile
Samsung Galaxy S5 avy any Verizon
Amin'izao fotoana izao ny Lineage OS dia manana ny kinova 14.1 ary miorina amin'ny Android 7.1 Nougat. Azonao atao ny misintona ireo ROM avy amin'ity rohy ity. Ny flashing ROM dia tsy miova amin'ny alàlan'ny fanarenana mahazatra any amin'ireo terminal izay mifanaraka, satria mitovy ao amin'io lisitra io izy ireo.
Na izany na tsy izany, ny Lineage OS dia mitady mpamorona bebe kokoa fa miara-miasa amin'ny tetikasa izy ireo. Tsy ho mora ny mahita mpiara-miasa izay manana mpizara na ireo izay mandany fotoana malalaka handrahoana ROM. Tsy toy izany koa isika tamin'ireny taona ireny raha saika fototr'izany ny famoahana ROM hafa satria ny mpamokatra dia saika nanavao ny tobiny noho ny fanaintainan'ny mpampiasa azy ireo na noho ny traikefan'ny mpampiasa sahirana natolotry ny fanao mahazatra. Niova izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny ROM OS Lineage tsy ofisialy voalohany dia efa misy
Android 7.1.1 dia ho tonga amin'ny Galaxy S7 sy S7 Edge alohan'ny faran'ny volana Janoary
Amazon dia mizaha ny hevitra amin'ny fanovana ireo trano fitehirizany ho lasa zeppelins